မြင်ရတွေ့ရ ရင်ဝမချိ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » မြင်ရတွေ့ရ ရင်ဝမချိ
Posted by •*¨နန်းတော်ရာသူ •*¨ on Mar 3, 2015 in Creative Writing, Think Different | 45 comments
ဘယ်သူ့ကိုမှ ဘယ်ဘက်ကိုမှလည်း ဝေဖန် လေကန်မလုပ်လိုတော့။
ပြတ်သားသင့်ပါတယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ဘက်က အပြည့်အ၀မထောက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းကိုမရှိ။
သွေးတိုးလှုံ့ဆော်ကြမယ့်အစား နားချဖျောင်းဖျပြီး ကိုယ့်ခေါင်းဆောင်ကောင်းကိုအရင်လမ်းဖွင့်ပေးကြစေချင်တယ်။
ကိုယ့်ထက်တတ်သိနားလည်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တောင် ပြတ်ပြတ်သားသားမရပ်တည်နိုင်သေးတာမို့ ခဏလောက်သီးခံလိုက်ကြတာပိုမကောင်းဘူးလားလို့။
ဒေါ်စုကိုထောက်ခံသူတွေကပဲ ဒေါ်စုရဲ့Image ကိုဖျက်နေကြပြီလား။
အမေစုလဲမတက်နိုင် ကလေးတွေလည်း အချောင်အထဲရောက်ကုန်မှာစိုးမိလို့ပါ။
ဖွတ် ဒီ ၀ီ ကြား ဘာကိုနားလည်ရမှန်းကိုမသိတော့
ဒီတိုက်​ပွဲကို ​ကျောင်းသားကိစ္စ လို့လဲ မမြင်​ဘူး ဥပ​ဒေ ကိစ္စလို့လည်းကွက်​​ပြောလို့မရဘူး ။ တစ်​ကယ်​တမ်းဖြစ်​​နေတာက ” ဓ​လေ့ ထုံးတမ်းစဉ်​လာကို ဖက်​တွယ်​ထားချင်​တဲ့ သူ​တွေနဲ့ ဓ​လေ့ ထုံးတမ်းစဉ်​လာ ကို ငြီး​ငွေ့သူတို့ရဲ့ တိုက်​ပွဲ ” လို့ပဲ မြင်​တယ်​ ။ ဒီကိစ္စ ပြီးသွားလည်း ​နောက်​ထပ်​ တိုက်​ပွဲ​တွေ ဆက်​ဖြစ်​​နေဦးမှာပဲ ။ ​လူမှု ​တော်​လှန်​​ရေးက ခုမှ စတာ ။
မလွဲပါဘူး​အေ မယုံရင်​​စောင့်​ကြည့်​လိုက်​ ဒါက ကွန်​ဆာ​ဗေးတစ်​နဲ့ ​လေဘယ်​လ်​ ​ရှေးရိုးနဲ့ ၂၁ ရာစု အ​တွေးအ​ခေါ် ထိပ်​တိုက်​ဆုံတာ ။ အ​တွေးအ​ခေါ်တိုက်​ပွဲ ယဉ်​​ကျေးမှု ​တော်​လှန်​​ရေး ။
သူဂျီး ​ရေ စပြီ ပြပြီ အခုမှ စတာ
( ပွဲ​ဈေးတန်းမှာ တုတ်​ထိုး ရုပ်​​သေး ပြတဲ့ သူ လူ​ခေါ်တဲ့ အသံမျိုးနဲ့ နား​ထောင်​ကြည့်​ ရန်​ )
အစဉ်​ အလာ ဓ​လေ့ ထုံးစံ သမား ​တွေက တစ်​ဖက်​ ​ခေတ်​စနစ်​နဲ့ အညီ ​နေထိုင်​မှု ပြုမူ ချင်​သူ​တွေက တစ်​ဖက်​ ဘယ်​လို ဇာတ်​သိမ်းမလဲ ​စောင့်​ကြည့်​ရမယ်​ ။
အ​ရေး ​တော်​ပုံ ​အောင်​ရမည်​ ။
ဒီနိုင်​ငံရဲ့ဓ​လေ့စရိုက်​အရဆိုရင်​ ဟို​နေ့က ​ကြောင်​ပို့စ်​မှာမန့်​ခဲ့သလိုပါပဲ။
. အဘနီ ကို ထောက်ခံပါသည်။ အသွင်ကူးပြောင်းစ တိုင်းပြည်တွေမှာ လစ်ဗြဲ နဲ့ ကွန်တစ် ယဉ်ကျေးမှု တော်လှန်ရေး လွန်ဆွဲပွဲ ဖြစ်စမြဲ။ အဲဒီ အခါ ကွန်တစ် အနိုင်ရစမြဲ။ အချိန်တစ်ခုကို လွန်မှ လစ်ဗြဲနဲ့ ကွန်တစ် မျှခြေ ပြန်ရောက်ပါသည်။ ဒီကြားကာလလေးက စပ်ကူးမတ်ကူး၊ တိုင်းပြည် အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာ မကွဲဖို့ တစ်ခုပဲ လိုပါသည်။ ဒီစပ်ကူးမတ်ကူး ကာလ လွန်သည်နှင့် ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် နိုင်ငံကို နှစ် ၅၀ အတွင်း ရောက်မည်ဟု ယုံပါသည်။
” ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် နိုင်ငံကို နှစ် ၅၀ အတွင်း ရောက်မည်ဟု ယုံပါသည် ”
မပြုံး နှစ် ၅၀ အတွင်း အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် နိုင်ငံ လုံးဝ မဖြစ်စေရဘူး စိတ်ချ ။
အပြတ်ပြောမယ် ၊ ဒေါ်စု တက်ရင်တောင် လုံးဝ မဖြစ်ဘူး ။
မလိမ်ကြေး မညာကြေး ဝန်ခံပါ ၊ မြန်မာလူမျိုးဟာ ၊
ရန်လိုပြီး စစ်ကိုလိုလားတဲ့ လူမျိုး ၊ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား ။
တရုတ်စကားနှင့် မြန်မာလူမျိုး ကို မင်ဒင့် ဆိုတာ Warrior တဲ့ ။
အခုလက်ရှိမှာ ၊ မြန်မာလူမျိုးတွေ ဟာ ၊
့ပြည်တွင်းမှာ ရှိရှိသမျှ တိုင်းရင်းသား လူမျိုး မှန်သမျှ အားလုံး ၊
ကချင် ကယား ကရင် ချင်း မွန် ရခိုင် ရှမ်း ဝ ပလောင် နှင့် စစ်တိုက်နေတယ် ။
့ပြည်ပ က တရုတ် ၊ ကုလား ၊ ယိုးဒယား အားလုံးနှင့်လည်း မတည့်ဘူး ။
တရုတ် ၊ ကုလား ၊ ယိုးဒယား အားလုံးကို မုန်းတီးရေး လုပ်ထားတာမှာလဲ ၊
အားလုံးဟာ ပေါက်ခါနီး ဆဲဆဲ ယမ်းပုံ အခြေအနေ ကို ရောက်နေတယ် ။
ဆိုလိုတာက ၊ တရုတ် ၊ ကုလား ၊ ယိုးဒယား လူမျိုးတွေ အားလုံး နှင့် ရော ၊
တိုင်းရင်းသား လူမျိုးတွေ အားလုံး နှင့် ရော ၊ နှင့် မြန်မာလူမျိုး ရဲ့ကြားမှာ ၊
အမုန်းတွေ နာကြည်းချက်တွေက ဖွဲမီးလို တလှိုက်လှိုက် လောင်နေတယ် ။
အဲဒီဟာ ဟာ ၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ အကြီးဆုံး အားနည်းချက်ဘဲ ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ မြန်မာပြည် တိုးတက် ချမ်းသာ လာကာနီးတိုင်းမှာ ၊
့မြန်မာပြည် တိုးတက် ချမ်းသာမှာကို မလိုလားတဲ့ အဖွဲ့ / တိုင်းပြည် တစ်ခုခုက ၊
အဲ့ဒီ မီးစကို လွယ်လွယ်လေး ကောက်ရှို့လိုက်မှာဘဲ ။
ရှင်းရှင်းလေးဘဲ ၊ ပြည်တွင်းမှာ အချင်းချင်း စစ်ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံဟာ ၊
ဘယ်လိုနည်းနှင့်မှ တိုးတက် ချမ်းသာ လာစရာ အကြောင်း မရှိဘူး ။
အဲဒီတော့ကာ ၊ နှစ် ၅၀ အတွင်း အချမ်းသာဆုံး စာရင်းဝင် နိုင်ငံ ၊
လုံးဝ ( လုံးဝ ) မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ ကျနော်ကတော့ ထင်တယ် ။
.မှန်ပါတယ်။ ဘဖောပြောတာ ပိုပြီး အကျိုး အကြောင်း ညီညွတ်ပါတယ်။ မျှစ်က လောဘကြီးသွားလို့။ အခု သပိတ်မှောက်ကိစ္စကိုတော့ ဘဖော ဘာမှ မပြောသေးဘူးနော်။ ဖြစ်နိုင်ရင် သဘောထားလေး သိချင်ပါတယ်။
ဒေါ်စုကို ချစ်တာ နှစ်ရာမရောက်စေဖို့ လို။
မှန်သော်ပြာမိ လွန်တာရှိ။ ရခိုင်ကိတ်စ ရှုလော့။
ဘွားတော် ကြီး နာမည်ပျက်လေရော့။
အခုလည်း မပြောသေးတာ အကြောင်းရှိမယ်ထင်။
ဒီမို​ရေစီရဲ့သ​ဘောကို ​သေ​သေချာချာနားလည်​မှီးမိုက​ရေစီနိုင်​ငံအဖြစ်​​သေ​သေချာချာရပ်​တည်​နိုင်​မှာပါ။
ဒါကို စုသ​ဘော​ပေါက်​​ပေမယ့်​ စု လူ​တွေသ​ဘောမ​ပေါက်​
ဒီ​တော့ တခုခု နစ်​နာစရာရှိရင်​ စုဆီပဲ လာစုမည်​
. နှစ်ဖက်လုံး ကို တိုင်းပြည်ဖျက် နေသူများ လို့ ဘဲ မြင်တယ်။
. ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို မလိုသူများ ပူးပေါင်း လုပ်ကြံပွဲ လို့ ဘဲ မြင်တယ်။
ကျိန်စာ မိနေတဲ့ တိုင်းပြည်။
. ကောင်းမဲ့လမ်းစ ဖြစ် တိုင်း အဖျက် ရောက်ရောက်လာတယ်။
တကယ်လဲ အစွမ်းရှိတာ မဟုတ်ဘဲနဲ့။
အာညောင်း ခံနိုင်ရင် ဆဲကြ။
လက်ညောင်းခံ နိုင်ရင် နီကြ။
ဒီမိုးဒီ​ရေနဲ့ ဒီပြည်​ကြီး​ရွှေပြည်​ဖြစ်​ဖို့ မ​မျှော်​
အရီးပြောတာမှန်တယ် အရီးကိုထောက်ခံတယ်။ အဲ့လိုပြောချင်တာမပြောတတ်လို့
ဒေါ်စုက.. ဘုန်းကြီးတွေပါရင်..မတို့မထိ(ရဲ)တော့…။ မပြော(ချင်)တော့…။
နိုင်ငံရေးလုပ်ချိန်မှာ သခင်အောင်ဆန်းလို… အသက်မငယ်တာမို့.. သူ့နောက်ဆုံးအချိန်တွေကို.. လူချစ်အောင်ပဲနေသွားဖို့ဖက်.. “ကဲ”ထားပြီထင်မိတယ်..။
ပြသနာက.. လူထုမှာ… ရှိတာလို့ပြောချင်တယ်..။
နိုင်ငံရေးကနေ.. ဘုန်းကြီးတွေကို ဖယ်ထုတ်ကြ..။
ဘုန်းကြီးနဲ့နိုင်ငံရေး.. ရောသမမွှေကြ..။ ဘုန်းကြီးတွေ မဲပေးရခွင့်တောင်းဆိုကြ.. ဘုန်းကြီးတွေကို… နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်.. လူထုခေါင်းဆောင်ရာထူးကြ..။
“Religion mixed with politics inamulti-faith country like ours portends destruction and devastation.”
.အပေါ်က စာကြောင်း နှစ်ကြောင်းကို ထောက်ခံပါတယ် သဂျီး ။ သို့သော် သဂျီးနဲ့ မျှစ်ကြော် ကီးလွဲနေတာရှိတယ်။ အဲဒါက သဂျီးက ဗုဒ္ဒဘာသာဘက် ဇောင်းပေးပြီး ပြောတာ။ မျှစ်ကြော်က ထေရ၀ါဒ နိုင်ငံတွေ အကြောင်း သိပ်မဖတ်ဖူးဘူး။ မျှစ်က အရှေ့အလယ်ပိုင်းပဲ ကြိတ်တာ။ အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံတွေမှာတော့ အထက်က စာကြောင်းနှစ်ကြောင်းဟာ ရာနှုန်းပြည့် မှန်ပါတယ်။ ထေရ၀ါဒ ကိုတော့ မသိ။
.ဘာသာရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး ရောသမမွှေရင် တိုင်းပြည်ဟာ အရှင်လတ်လတ် ငရဲပြည်ရောက်တယ်။ (အစ္စလာမ္မစ် တိုင်းပြည်ကို ပြောတာ) ပြီးတော့ သဂျီး မပြောတဲ့ ယိုပေါက် တစ်ခုရှိသေးတယ်။ အဲဒါက political acumen နိုင်ငံရေး အမြင်ထက်မြက်စူးရှပြီး ဘာသာရေးမှာ အစွန်းရောက်ရင် ပိုဆိုးပါသတဲ့။ အဲဒါကို တိုင်းမ်မှာ နိုင်ငံရေးပညာရှင်နဲ့ ဗျူး တာကို ဖတ်ထားတာ။ ခက်တာက သူ့နာမည် ရှည်လွန်းလို့ မျှစ်ကြော် မေ့သွားပြီ။
..ကျောင်းသားတွေနဲ့ ရဲတွေ ညခင်းကို အေးအေးချမ်းချမ်း အတူတူ ဖြတ်ကျော်နေကြပြီး .. စကားပြောဆို ရီမောကြ၊ ရေတိုက်ကြ၊ မုန့်စားကြ၊ တွေ့နေရတာကို … အတွင်းခံထဲ ပုရွတ်ဆိတ်ဝင်နေသလို .. နေမထိ ထိုင်မရ ဖြစ်နေတဲ့ … အွန်လိုင်းက လူတချို့ကို မြင်ရရင် .. သူတို့ကို ကြည့်ပြီး ….
… တဝါးဝါး တဟားဟား မရီမိပေမယ့် .. ပြုံးနေမိတယ်။
ဘာ​ကြောင့်​လည်းဆို​တော့ မြို့တိုင်းမှာ​ကော၊လက်​လုပ်​လက်​စားတိုင်းပါသုံးတဲ့fb မှာကို မဘသ နဲ့ မဘသ စစ်​စစ်​မဟုတ်​ငြား ဆင်​သ​ယောင်​​ယောင်​ လူ​တွေ အနံ့ရှိ​နေတဲ့အတွက်​ အား​ပေးကူညီမု​တေ်ွ ​တော်​​တော်​ပြတ်​​တောက်​သွားမှာပါ။
ပထမဆုံးသပိတ်​မးအစနဲ့ ​နောက်​တပြန်​စတဲ့ သပိတ်​​တောင်​ အ​ခြေအ​နေချင်းကွာခြားသွားလို့ ​ကျောင်းသား​တွေ ဇွတ်​မချီနိုင်​ကြ​တော့ဘူး။​လောက်​ကိုင်​နဲ့ပတ်​သတ်​တဲ့တပ်​ချစ်​သူကတဖွဲ့ ဘကကိုဖျက်​သင့်​တယ်​လို့ ​ပြောခဲ့တယ်​ဆိုပြီး ​ဒေါသထွက်​သွားတဲ့ ​နောက်​တစ်​စုကတဖွဲ့။ဆို​တော့ ​ရှေ့တိုးလို့ ခံရလည်း ၈၈မှာလို နာမည်​လှလှတပ်​ကြ​တော့မယ်​မထင်​ဘူး​လေ။
ဒီပုံကိုမြင်​ရ​တော့ သပိတ်​​မှောက်​တာက ​ကျောင်းသား​တွေလား ရဲ ​တွေလား သိပ်​မသဲကွဲ​တော့ဘူးရယ်​
တဖက်မှားလို့ မြင်တဲ့အခါ အမှန်ဖက်က ရပ်တည်ပေးချင်တယ်(လုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ၊မလုပ်နိုင်သည်ဖြစ်စေ)
တဖက်မှ မမှန်ဘူးလို့ မြင်တဲ့အခါ ဘယ်ဖက်ကမှလည်း ရပ်တည်မပေးနိုင်တော့ဘူး။ဦးတည်ချက်လည်း ပျောက်တယ်။မျှော်လင့်ချက်လည်း ပျောက်တယ်။
ဒုံရင်းက ဒုံရင်း​ပေါ့ တီဒုံ​ရေ
ဟုတ်တယ်ဟေ့.. နာရေးကူညီမှု အသင်းက ကျော်သူတို့ လင်မယား ငအတွေ၊ ရွှေညဝါဆရာတော်၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဆရာတော်၊ ရှင်ဆန္ဒာဓိက တို့က မြှောက်ပေးနေတာ၊ ယူအန်အေက ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ ဦးအေးသာအောင်နဲ့ တိုင်းရင်းသားပါတီခေါင်းဆောင်တွေက ညာခိုင်းနေတာ.. ဒေါက်တာသိန်းလွင်နဲ့ ဒေါ်ညိုညိုသင်းတို့က ရုပ်သေးဆရာမတွေ..။
တခုတော့ ပြောလိုက်မည်.. နီတို့ ခလေး ကျောင်းပျက်မှာ ကြောက်လို့၊ မြှုပ်ထား ရင်းထားတဲ့ မြေကွက် ဈေးကျမှာစိုးလို့.. ဖွင့်ထားတဲ့ ဆိုင်လေး မရောင်းရမှာဆိုးတာနဲ့ ဘဝနဲ့ရင်းပြီး ပညာရေးစနစ်ကို ပြင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ညီငယ် ညီမငယ် ကျောင်းသူားတွေကိုတော့ ထိုးမချလိုက်ပါနဲ့။ နီတို့ ခလေး ကျောင်းတက်ရက် ပျက်မှာ၊ စာမေးပွဲဖြေတာ အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှာ၊ ဝင်ငွေနည်းသွားမှာ ဟုတ်သလို သပိတ်မှောက်ကျောင်းသူားတွေကလည်း ဘဝနဲ့ရင်းပြီး ထောင်တန်းအကျ အစွန့်အစားခံပြီး ယုံကြည်ရာ လုပ်နေတာ။ နည်းနည်းတော့ ကိုယ်ခြင်းစာတတ်ပါ။
က​လေး​တွေ​ကျောင်းပျက်​မှာစိုးစရာမရှိ။က​လေး​တွေ ပညာ​ရေးမြင့်​မား​အောင်​​မျှော်​စရာမလို။အချိန်​တန်​ သူ့​ခေါင်း​ဆောင်​နဲ့ သူ့နိုင်​ငံ တလမ်း​ကြောင်းထဲ အသားကျသွားတဲ့အခါ။​သွေးထွက်​သံယိုမရှိ ပြီးရမှာ။မြှပ်​ထားတဲ့​မြေကွက်​လည်း​ဈေးကျစရာမလို ဒါ​တွေက ပါစင်​နယ်​ခင်​မင်​မှုကိုအခွင့်​​ကောင်းယူပြီး တိုက်​ခိုက်​​ဝေဖန်​တဲ့အသုံး​တွေပဲ။စွန့်​စား​နေတဲ့ ​ကျောင်းသား​ကျောင်းသူ​တွေ ကကျွန်​မတို့ညီမ​မောင်​​တွေအရွယ်​ပါ။ကျွန်​မညီမကိုယ်​တိုင်​​ကျောင်းတက်​​နေတုန်းပါ။ကကျွန်​မတို့ညီမ​မောင်​​တွေအရွယ်​ပါ။ကျွန်​မညီမကိုယ်​တိုင်​​ကျောင်းတက်​​နေတုန်းပါ။ယခုအချိန်​က ဦး​နေ၀င်းလက်​ထပ်​လိုမဖြစ်​မ​နေတက်​မှရမှမဟုတ်​သလိုဦး​နေ၀င်းလက်​ထပ်​လိုမဖြစ်​မ​နေတက်​မှရမှမဟုတ်​သလို မလိုပဲစွန့်​စရာမလိုပါ။ ကျွန်​မ​လောက်​ကိုယ်​ချင်းစာတတ်​လွန်းလို့ မျက်​နှတာင်​မ​ဖော်​ပြတြ့ လူမျိုး​တွေနဲ့အပြိုင်​​ပြော​နေတာ။သူတို့​သေရင်​ ရှင်​တို့ သားသမီး​တွေ​သေမှာမဟုတ်​ အစိုးရကတကယ်​မလုပ်​တတ်​တဲ့အစိုးရဆိုရင်​​တော့ ကျွန်​မလျှာရှည်​​နေစရိာမလို
ပညာရေး ဥပဒေကြီး ကို မိုးပျံ အောင် ပြင်ထားပြီး နောက်က အကောင်အထည်ဖော်မဲ့ သူတွေ က သူခိုး တွေချည်း ဖြစ်နေရင် အောင်မြင်မယ်တဲ့လား။
တစ်ဘို့ ထဲ ကွက် မကြည့် နဲ့လေ။
ဒုံရင်း အတိုင်းဘဲ ဆင်းရဲတွင်း နက်နေမဲ့ ကလေး မိဘ တွေ က ပညာရေး ကို အားပေးမတဲ့လား။
အင်မတန် ကောင်းတဲ့ ပညာရေးစနစ် ရှိတဲ့ တိုင်းပြည်တွေမှာ တောင် အောက်ခြေ လူတန်းစား တွေ ရဲ့ ကလေး တွေ ပညာရေးမှာ နိမ့် နေဆဲ။
ဒါကြောင့် နေရာစုံ မှာ ကောင်းတဲ့ ဥပဒေရှိမှ တိုင်းပြည် တကည် တိုးတက်မှာ။
တစ်နေရာထဲ ထိုးကောင်းလဲ ဘုတ်အုပ် ထဲ မှာ ရေးထားတဲ့ စာတွေ ဘဲ ကောင်း တာ မြင်ရမယ်။
မဟုတ်ဘူးဦးကြောင်မှားနေပြီ။ ခုကလေးတွေလုပ်နေတာ တောင်းနေတာတွေဟာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးကို ကိုယ်စားမပြုဘူး။ ဒါကို ပြည်တွင်းနေသူတွေပဲပိုသိတယ် ဦးကြောင်။ ခုဟာကဒေါ်စုကိုအကျပ်ရိုက်အောင်လုပ်တာဟုတ်ရင်ဟုတ် မဟုတ်ရင်တချိန်မှာဒေါ်စုလက်ထဲကအာဏာကိုပြန်လုဖို့လူစုနေတဲ့လူတစုရဲ့စနက်ပဲ။ မူမမှန်ဘူး
(ထမင်းနဲ့စားတဲ့ ဟင်းလျာကို ပြောခြင်းမဟုတ်…/ သက်ပြင်းချသံ သက်သက်… )
ဒီအချိန်မှာ ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့.. အဲဒီ ပြင်းထန်လွန်းလှတဲ့ သပိတ်ကို မထောက်ခံပါဘူး…
အူးကြောင်ယဲယဲနီနေဒါဂို မကျိယက်ဝူး များကယ်ဂျင်ဒယ်
ဒယ်ဒီသဂျီးမန်း အူးကြောင်ဂိုခဏခဏစိမ်းခွင့်ပျုဘာ သုဂိုများကယ်မှဖစ်မယ်
.မ​အောင်​မြင်​နိုင်​တဲ့ အလုပ်​ကို အစားထိုး​ပေး​တော့မယ်​…
အခု တကွက်​ထဲနဲ့တင်​ ၈၈ ကို အလုပ်​​ပြောင်း​ပေးလိုက်​ပြီ …
.မကြာခင်​ ဒီမို​တွေကို အလုပ်​​ပြောင်း​ပေးမယ်​..
.​နောက်​ထပ်​တလှည့်​မှာ အဲသည်​ပါဆယ်​ ​ဒေါ်စုဆီ​ရောက်​မယ်​….
.လက်​မခံရင်​ နာမည်​ဖျက်​ပြီးသားပြည်​သူနဲ့ ရန်​တိုက်​ပြီးသားဖြစ်​မယ်​..
.ရခိုင်​တုန်းကတခါ လက်​ပန်း​တောင်း​တောင်​တုန်းကတခါ ဒီလိုပဲခံလိုက်​ရပြီးပြီ
.ဒီနိုင်​ငံက ​နောင်​နှစ်​တစ်​ရာနဲ့လဲ နလံထူမယ်​မထင်​…
လက်ပတန်း အဖြစ်ကိုကြည့်ပြီး ကျွန်တော်ကတော့ ကျောင်းသားထုလည်းမှားတယ်မထင်။ တားမြစ်ဖို့ရောက်နေကြတဲ့ရဲတွေကိုလည်း အပြစ်မဆိုချင်ပါဘူး။ နှစ်ဖက်လုံးကို သနားမိတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ စနစ်ဆိုးတစ်ခုအောက်မှာ သူတို့တွေ စားကောင်းခြင်းမစားရ အိပ်ကောင်းခြင်းမအိပ်ရရှာလို့ပါ။
အဲဒီစနစ်ဆိုးကို ဗြဟ္မာဦးခေါင်းလို ဦးထိပ်ရွက်ပန်ပြီး လွှတ်မခနိုင်သေးဘဲ လက်ဆင့်ကမ်းသယ်လာသူတွေကိုဘဲ အပြစ်ဆိုချင်တယ်။
ရှင်ဆန္ဒာဓိက က သွေးထိုးပေးသူလား၊ ဒေါ်စုဆီက အာဏာလုမည့်သူလား၊ ကူမြူ နစ် ဘုန်းကြီးလား လုပ်ပါဦး လက်တွေ့မပြောနဲ့ ပါးစပ်တောင် မဟရဲတဲ့ ဆ်ိတ်စွမ်းအားရှင် အပေါင်းဒို့..
ရွှေပါရမီတောရဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိကရဲ့ ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းက ၂ဝ၁၄ – ၂ဝ၁၅ ပညာသင် နှစ်အတွက် ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်ကျော် ထောက် ပံ့ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း Sedona ဟိုတယ်မှာ တတိယအကြိမ် တက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆု ချီးမြှင့်ခြင်းနဲ့ အလှူငွေပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားမှာ ဆရာတော် အရှင်ဆန္ဒာဓိကက မိန့်ကြားခဲ့တာပါ။
ဆရာတော်က သပိတ်မှောက်ကျောင်းသူ ကျောင်း သားတွေ တောင်းဆိုနေတဲ့ ပညာရေး စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကို ထောက်ခံကြောင်းနဲ့ ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆိုင်ရာမှာ ဟန်ပြအဖြစ်မလုပ်ဖို့ကိုလည်း မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။
“ပညာရေးကို အဆင့်မြင်စနစ်ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ ပြုပြင်ဖို့အတွက် ကျောင်းသားတွေတောင်းဆိုနေ ကြတယ်၊ အခုလည်း ဆွေးနွေးနေကြတယ်ပေါ့နော်၊ ဗန်း ၁၁ ချပ်လုပ်ပေးထားတာကတော့ ကျောင်း သားတွေတောင်းဆိုနေကြတဲ့ တောင်းဆိုချက်က ၁၁ ချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ အဲ့ဒီ ၁၁ ချက်ကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ ဗန်း ၁၁ ချပ်လုပ်ထားတာပါ၊ ဒီပညာရေးစနစ်ကိုလည်းပဲ ပြုပြင်တာကိုလည်းပဲ ဗန်းပြ မလုပ်ပဲ ပန်းပြလုပ်ပါ၊ ဟန်ပြမလုပ်ပဲနဲ့ စံပြဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ အဓ်ိပ္ပါယ်တွေပါပဲ”
ဒီနှစ်အတွက် ကျပ်ငွေသိန်းတစ်ထောင် ထောက်ပံ့ငွေကို ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ၁၃ဝ က လက်ခံရရှိမှာ ဖြစ် ပါတယ်။
ရွှေပါရမီ တက္ကသိုလ်ပညာသင်ဆုကို ဆေးတက္ကသိုလ်၊ သူနာပြု၊ ရန်ကုန်နည်းပညာ၊ မန္တလေးနည်းပညာ၊ ရတနာပုံ ဆိုက်ဘာစီးတီး၊ ရေကြောင်း၊ ပညာရေးတက္ကသိုလ်နဲ့ ပညာရေးကောလိပ်ကျောင်းတွေမှာ ပညာသင်ယူနေ ကြတဲ့ နွမ်းပါးပြီးထူးချွန်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ပေးအပ်ထားပါတယ်။
ရွှေပါရမီ ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်ကို ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်မှာ စတင်ထူထောင်ခဲ့ပြီး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၃၊ ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်အတွက် ရန်ကုန်နဲ့ မန္တလေးမှာရှိတဲ့ တက္ကသိုလ်အသီးသီးက ကျောင်းသား ၅၅ဝ ကျော်အတွက် ကျပ်ငွေသိန်းပေါင်း ၃ ထောင်ကျော် ထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်။
ဘယ်ဘုန်းကြီး ဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ဘုန်းကြီး ဆိုတာ ဘုန်းကြီး အလုပ်လုပ် မှ ဘုန်းကြီး လို ဆက်ဆံ လို့ ရပါမယ် ကြောင်ကြောင်။
ဒီတော့ Professional ဘုန်းကြီး ဆိုရင် ကိုယ့် အလုပ် ကိုယ် လုပ် နေသူ ပါ။
မဟုတ်ရင်တော့ သူ့မှာလဲ သူ့ အလုပ် အတွက် ကြိုးစားရန် ကျန် နေသေးသည်လို့ ဘဲ ပြောပါ့မယ်။
အခု အရှင်ဆန္ဒာဓိက ပြောတာ က မျှမျှတတ ဖြစ်ပြီး ငြိမ်းချမ်းဖို့ သဘော ဘယ်သူ့ ဘက် ကို မှ မဟုတ်ပါလို့ နားလည်ပါတယ်။
လိုရာ ကို သိပ် မဆွဲပါနဲ့။
ဘုန်းကြီး က ကြားမနေဘဲ တစ်ဖက် ကို စောင်းနေ ရင်တော့ Pro မဟုတ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဟုတ်​ကဲ့ မျှမျှတတ ဖြစ်​ဖို့ဆရာ​တော်​က​ပြောတာ။​ဆွေး​နွေးမှု အတည်​ပြုမျု မပြီးခင်​ ဇွတ်​လုပ်​ဖို့မဟုတ်​။NNER ​ကော ​ကျောင်းသား​ခေါင်း​ဆောင်​​တွေကပါ လွှတ်​​တော်​ကြားနာမှုကိုမတက်​တာဟာ ဘာအဓိပဲလဲ။လိုချင်​တာက လွှတ်​​တော်​မှာလား ရန်​ကုန်​မှာလား၊။ ရန်​ကုန်​မချီရလို့ လွှတ်​​တော်​မကြားနာနိုင်​တာကိုက အဓိက သာမည လွဲ​နေပြီ၊ပူ​စေချင်​တာ သက်​သက်​ ဖြစ်​​နေပြီ။ဖြစ်​​နေပြီ။
စွမ်းအားရှင်​ဆွဲတဲ့အတွက်​​တော့ စိတ်​စွမ်းအားရှင်​လို့စွပ်​စွဲခံရလဲ ရှက်​ဖို့မလို ။အစတည်းကီးလိုလုပ်​ရင်​ ဒီလိုအဆွဲခံရမယ်​။ဒီလို ဆူပူကုန်​မယ်​ဆိုတာ ကျြုးကိုင်​သူ​တွေတွက်​ပြီးသား။
ဘာဖြစ်​​နေပြီ​ဟေ့ နင်​တို့ဘာ​ပြောဦးမလဲဆိုတဲ့ ၅နှစ်​သားစကား​နဲ့​တော့ လာကပ်​မ​ပြောနဲ့
ပူခြင်းရဲ့အဆုံးသတ်​ကဘာလည်း ​ဒေါ်စု ​ချောက်​ထဲကျဖို့။
ဒီပုံစံနဲ့​တော့ စုတက်​ဖို့လည်းမ​မျှော်​​တော့ ဖြစ်​ချင်​ရာဖြစ်​ကြ​တော့။​မျှော်​လင့်​ချက်​လည်း အရည်​​ပျော်​လာပြီ။
ဒီအချိန်အထိ.. စု သမ္မတဖြစ်ဖို့.. မှန်းနေသေးတာလားဟင်င်…။
ဒီတခေါက်ရွေးကောက်ပွဲအပြီး.. ဒေါ်စုအဖြစ်နိုင်ဆုံးက.. အလွန်ဆုံး(အလွန်ဆုံး).. အခုဦးရွှေမန်းနေရာ…။
နောက်၅နှစ်.. ၂၀၂၀မှာက.. သမ္မတက.. ဦးမင်းအောင်လှိုင်..ဒါမှမဟုတ်.. ဦးရွှေမန်း..။
နောက်၁၀နှစ် ၂၀၂၅မှာက.. ဦးမင်းအောင်လှိုင်..။
သူကြီးပြောတာ သေချာသလောက် ဆိုရင်…
.နောက် ငါးနှစ်အတွင်း…. ၂၀၂၀ မတိုင်ခင်… မြန်မာပြည်တွင်းက ကျနော် ထွက်မယ်။
တကယ်တော့ မတ်လ (၁) ရက်နေ့ မတိုင်ခင် အချိန် အထိကိုတော့
လွှတ်တော်ကလည်း ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်နေကြတဲ့အချိန်ဆိုတော့
ကျောင်းသားတွေ အနေနဲ့ ဒေါ်စုပြောသလို စောင့်ကြည့်သင့်တယ်။
ဒီ အစိုးရကိုတော့ ဘယ်တော့မှ မထောက်ခံပါဘူး။
မြန်မာပြည်သူား အပေါင်း ပါးနပ်ဖို့တော့ လိုတယ်။
လက်ပံတန်းမြို့မှာ ကျောင်းသားသပိတ် စစ်ကြောင်းတွေကို ပိတ်ဆို့ထားပြီး ရန်ကုန်မြို့မှာ လည်း ကျောင်းသား အဖွဲ့တွေကို ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးမှုတွေ ရှိခဲ့တာကြောင့် ကြားနာပွဲကို မတက်ရောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ် ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်း အမျိုးသမီးရေးရာကို ဆောင်ရွက်နေ တဲ့ ပြည်ကြီးခင်အဖွဲ့က မနွယ်ဇင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
“တက်ရောက်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်တွေက မတက်ရောက်တော့ဘူးလို့ လောလောဆယ် ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နော်၊ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ ကျောင်းသားတချို့လည်း လက်ပံတန်းမှာ ပိတ်မိနေတယ်၊ တက်ရောက်မယ့် အရပ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းတွေကလည်း အကြံပြုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့် သွားဖို့ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားတယ်၊ ဒါပေမယ့် အခြေအနေကလည်း မကြာသေးခင်ကပဲ အကြမ်းဖက်မှုတွေက ရန်ကုန်မှာလည်း ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်၊ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ ဒီပညာရေးဥပဒေကို အကြံပေးဖို့အတွက် သွားပြီးတော့အကြံမပေးသေးဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်”
လွှတ်တော်ကြားနာပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းက ကိုယ်စားလှယ်တွေက မနေ့က ရန်ကုန်မြို့မှာ အစည်းအဝေးပြုလုပ်ပြီး ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေပြင်ဆင်ရေး ကြားနာပွဲတက်ရောက်ဖို့ ကမ်းလှမ်းခံထားတဲ့ ရန်ကုန်အခြေစိုက် ရတနာမေတ္တာအဖွဲ့၊ ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေးအသင်း ၊ မန္တလေးမြို့ ဗြဟ္မစိုရ်အသင်း ကိုယ်စားလှယ်တွေ ကလည်း မတက်ရောက်လိုတဲ့အကြောင်း အကြောင်းပြန်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကြားနာပွဲကို ပညာရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကွန်ရက် (NNER) နဲ့ ဒီမိုကရေစီပညာရေးလှုပ်ရှားမှု ဦးဆောင်ကော်မတီဝင် ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း မတက်ရောက်နိုင်ကြောင်း လွှတ်တော်ကို တင်ပြခဲ့ပါတယ်။